वैज्ञानिकले बनाए डेंगु प्रतिरोधी लामखुट्टे, नौ देशमा सफल परीक्षण -Salyan Online
सल्यान अनलाइन, भाद्र ३०, २०७६
भदौ ३०, २०७६ हनोई : यो वर्ष नेपालसहित दक्षिण र दक्षिण-पूर्व एसियाली मुलकुमा डेंगुले आतंक मच्चायो। नेपालमा त यसले महामारीको रुप नै लिएको छ। अहिलेसम्म ५ जना मानिसको ज्यान गएको छ भने हजारौँ प्रभावित भएका छन्। नेपालसहित फिलिपिन्स, भियतनाम, मलेसिया, म्यान्मार र कम्बोडियामा डेंगुका कारण भयावह स्थिति भएको छ। विशेषज्ञले यसका लागि तापमान र बचाउको पर्याप्त उपाय नहुनुलाई जिम्मेवार ठानेका छन्।
डेंगुको महामारी बढिरहेका बेला वैज्ञानिकको एक समूहले लामखुट्टेबाट लाग्ने डेंगुसहितका रोगबाट जुध्नका लागि डेंगु प्रतिरोधी लामखुट्टेकै विकास गर्न सोध गरिरहेका छन्। यो लामखुट्टेबाट डेंगुसँग जुध्न सकिने विश्वास गरिएको छ। यसका लागि ९ देशमा परीक्षण पनि गरिएकोछ। जसले राम्रो नतिजा दिएको छ। लामखुट्टेबाट लाग्ने रोगहरुसँग जुध्नका लागि वैज्ञानिकहरु वर्ल्ड मस्क्विटो प्रोग्राम (डब्ल्यूएमपी) अन्तर्गत काम गरिरहेका छन्। भाले र पोथी एडिज (डेंगु फैलाउने) लामखुट्टेलाई जंगलमा छोड्नु अघि रोग प्रतिरोधी ब्याक्टिरिया वोल्बाचियाबाट संक्रमित गरिने छ। केही सातामै बच्चा लामखुट्टेले वोल्बाचिया ब्याक्टिरियासहित जन्म लिन्छ।
जसले रोग प्रतिरोधकका रूपमा काम गर्छ। यसले केबल डेंगु मात्रै होइन, जाइका, चिकनगुनिया र औलो जस्ता रोगबाट बच्न सकिन्छ। पहिलो पटक उत्तरी अस्ट्रेलियामा यसको परीक्षण गरिएको छ। भियतनाममा डब्ल्युएमपीको प्रोजेक्ट प्रमुख गुएन बिन्ह गुयेनका अनुसार वोल्बाचिया ब्याक्टिरिया भएको लामखुट्टे छाडिएपछि डेंगुका विरामी धेरै घटेका छन्।
डेढ लाख संक्रमित लामखुट्टे छाडियो
गुएनको टिमले दक्षिणी भियतनामको डेंगु पीडित जिल्ला विन्ह लुओङ्गमा करिब डेढ लाख वोल्बाचिया-संक्रमित लामखुट्टे छाडेका थिए। विन्ह लुओङ्गमा डेंगुको मामिलामा ८६ प्रतिशत कमी आएको छ। यस खोजलाई लिएर एक महिला आफ्ना लागि राहतको खबर भनेकी छन्। सन् २०१६ मा उनका दुवै बच्चालाई डेंगु भएको थियो। उनले अब आफू ७० देखि ८० प्रतिशत सुरक्षित रहेको बताइन्। दक्षिण-पूर्व एशियामा डेंगुबाट १८ सयको मृत्यु
विश्व स्वास्थ्य संगठनको रिपोर्ट अनुसार यस साल दक्षिण-पूर्व एशियामा डेंगुका करिब ६ लाख ७० हजार मामिला सार्वजनिक भएका छन्। जसमा १८ सयले त ज्यानै गुमाएका छन्। विशेषज्ञका अनुसार यो साल अवस्था एकदमै खराब थियो।
डेंगुको एक मुख्य कारण उच्च गर्मी हो । विश्वभरमा जुलाई धेरै तातो रह्यो। लण्डन स्कुल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनका सहायक प्रोफेसर राचेल लोभेका अनुसार तातो मौसम डेंगुका लागि उपयुक्त मानिन्छ।
१९२० मा वोल्बाचियाको खोज
वैज्ञानिकहरुले सन् १९२० मा वोल्बाचिया ब्याक्टिरियाको हार्वर्ड युनिभर्सिटीका ड्रेनेज सिस्टममा रहने लामखुट्टे खोजेका थिए। सिंगापुर र मलेसियामा अहिले केबल भाले लामखुट्टेमा वोल्बाचिया ब्याक्टिरियाको प्रयोग गरिँदैछ।
वैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले वित्तिय साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्ने
सरिता चलाउने, असोज ६ सल्यान ।
सल्यानमा संचालनमा रहेका बैंक तथा बितिय सस्थाहरुले स्थानीय तहहरुमा साक्षरता कक्षा संचालन गर्ने भएका छन…
जिल्लामा होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायमा लागनी बढ्दै गएको छ । जिल्लामा केही वर्षयता दर्जनौ होटल तथा रेन्टुराँ खुलेका…
एउटा बोकाको मूल्य साढे २ लाख !
भदौ २९, २०७६ म्याग्दी : गाउँघरमा पाइने एउटा बोकाको मूल्य कति पर्ला? २० हजार,५० हजार वा त्यो भन्दा पनि बढी? तपाइँको अनुमान भन्दा धेरै…